Tokony hivarotra teny lakile raha tsy misy volan'ny fikarohana? | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 10, 2012 Alatsinainy Desambra 10, 2012 Douglas Karr
Ny teny lakile dia ny fiteny iraisan'ny fanantenanao, ny tranonkalanao ary ny valin'ny motera fikarohana hitanao. Manan-danja izy ireo noho ny fifandraisany sy ny fahafahany miova. Ho an'ny tranokala toa an'i Martech, ny teny fanalahidy midadasika dia mety manandanja ny fitsidihana. Fa izany dia satria ny fitsidihana sy ny lazany ankapobeny no tanjon'ity bilaogy ity.
Ho an'ny orinasanao, ny fitsidihana dia tsy tokony ho ny fampisehoana fampisehoana voalohany amin'ny tranokalanao, fa tokony ho anao izany fiovam-pony. Imbetsaka, ny teny fanalahidy miova dia tsy mitovy amin'ireo izay mitondra fivezivezena. Ny fanadihadian'ny orinasa fanatsarana maro dia nahita fa, na dia misy laharana lehibe amin'ny haben'ny karoka aza, ny teny lakile tokana dia afaka mitondra fitsidihana an'arivony… fahari-rambony fehezan-teny misy teny 3 ka hatramin'ny 4 dia afaka mitondra fiovam-po maro hafa.
Ahoana ny amin'ny teny lakile raha tsy misy volan'ny fikarohana? Alohan'ny hamaliantsika izany dia tokony holazaintsika izany tsy misy ny haben'ny karoka araka ny notaterin'i Google. Saika ny karazana teny lakile na andianteny mifandraika rehetra dia misy karazana volony… na dia fikarohana vitsivitsy monja aza isam-bolana.
Iray amin'ireo mpanjifanay dia ny Right On Interactive - orinasa mandeha ho azy ara-barotra izay miasa miaraka amin'ireo orinasa mba tsy hisambotra fitarihana fotsiny fa hampisondrotra ny sandan'ny mpanjifa tsirairay. Rehefa nanazava ny orinasany tamin'ny vinavina izy ireo, ilay andianteny marketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifa nanazava izany mora kokoa noho ny hafa rehetra ao amin'ny orinasa. Na dia fehezan-teny tonga lafatra ho an'ny orinasan-dry zareo aza izany dia tsy nisy haben'ny fikarohana ny varotra androm-piainan'ny mpanjifa raha nanomboka niara-niasa tamin'izy ireo izahay herintaona lasa izay.
Tsy nanoro hevitra ny Right On anefa izahay mba hampitsaharana ny varotra amin'io teny lakile io, na izany aza. Izy io dia fehezan-teny mahavariana iray izay mifandraika amin'ny marika misy azy ireo ary mety ho teny iray izay nanjary be mpampiasa kokoa amin'ny ho avy. Izany indrindra no zava-nitranga. Marketing amin'ny fiainana andavanandron'ny mpanjifa dia teny iray mitombo amin'ny lazan'ny olona sy amin'ny haben'ny karoka. Misy fikarohana 30 mahery isam-bolana amin'izao fotoana izao. Ary fantaro hoe iza no milahatra amin'izany?
Aza ferana ny resaka eo amin'ny tranokalanao fa ny teny lakile sy andian-teny malaza indrindra izay manana ny haben'ny karoka indrindra! Mampiasà fehezan-teny rehetra izay manan-danja amin'ny orinasanao, na dia mitondra fitsidihana tokana aza izany! Ny mety hitrangan'ny teny lakile na andian-teny iray ny fiovam-po dia mihamitombo hatrany amin'ny fifandraisany… fa tsy ny habetsany. Ny tsara indrindra, raha ambany ny isan'ny karoka… mety tsy hifaninana firy amin'izany fifamoivoizana izany ianao!
Tags: fehezanteny lehibeteny fanalahidymahitsy amin'nymahitsy amin'ny interactive
Dec 19, 2012 amin'ny 6: 19 AM
Betsaka ny karazana torohevitra momba ny teny lakile. Ary mampiady hevitra ihany koa. Ho ahy ny antony mahatonga ny andian-teny lava rambo mitarika fiovam-po bebe kokoa satria rehefa manoratra ny fikarohana manokana ianao dia efa nanapa-kevitra ny hividy.